ပို့စ်နှင့်ကွန်းမန့်များ ဖျက်ပေးပါ မာမွတ်Kai | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Myanmar Gazette » ပို့စ်နှင့်ကွန်းမန့်များ ဖျက်ပေးပါ မာမွတ်Kai	9
ပို့စ်နှင့်ကွန်းမန့်များ ဖျက်ပေးပါ မာမွတ်Kai
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Jun 19, 2016 in Myanmar Gazette |9comments
မုံးတီး စက်စုတ် ယွံလျှာရပါသော အယာတိုလာ မာမွတ်ခိုင်မ် ခင်ဗျား… ဂဇက်တွင် ဖေါ်ပြသော ဘာသာရေး အ၃အနှုန်း သဘောထားကို မနှစ်သက်ရွေ့ လိပ်ခေါင်း၊ ဆရာမမျှစ်ကြော်၏ပို့စ်တွင် ခြစ်လုမ တောင်းဆိုချက်အား ထောက်ခံသည့် အနေနှင့် လိပ်ခေါင်း ကျနော့် အသွေးအသား အူစိုင်အူမ အသဲနှလုံးသွေးများဖြင့် တည်ဆောက်ဖွဲ့ဆိုထားသော ပို့စ်၊ ကွန်းမန့်များအား မဆိုင်းမတွ ခုချက်ခြင်း ဖျက်ပေးရန် ပန်ကြားပါသည်။။။။။
ခင်ဇော် says: ကြောင်ကြီးး အသွေးအသား အူစိုင်အူမ အသဲနှလုံးသွေးများကို ဖျက်ပြီးးပါက
ခင်ဇော် ကလီစာ ပို့စ် အတွက် ပေးးပါရန်
ဥခိုင် ကို တောင်းဆိုချင်ပါသသည်..
မြစပဲရိုး says: ကြောင် တုတ်ထိုး ဖြစ်တော့ မယ်။
အချဉ်ရည် နဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရတော့မယ်။ :-)))
ဒါထက် ပြီးရင် ဘူသူ စားမတဲ့လဲ။ ဒါကြောင့် စားမဲ့သူ ပေါ်မှ ဖျက်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
ဂျစ်စူ says: ပလီက ပြန်လာရင် ဖျက်ပေးမယ်တဲ့ ဥကျောင်ချီးရဲ့
ဦးဦးပါလေရာ says: ကကြောင်ရဲ့..
ဒါမျိုးက ထုတ်ပြောသူရှိမှ ရှင်းလို့ရတာ
Thint Aye Yeik says: ဖျက်ချင်တိုင်းဖျက်ရအောင်
သူကြီးက ခဲဖျက်ကြီးမှ မဟုတ်ဖဲ
သူကြီးက ဘောဖျက်ကြီးမှ မဟုတ်ဖဲ
သူကြီးက လက်သယ်ကြီးမှ မဟုတ်ဖဲ
သူကြီးက အမဲဖျက်သူကြီးမှ မဟုတ်ဖဲ
၀င့်ပြုံးမြင့် says: သများကို လိပ်ခေါင်းတဲ့။ ဥကြောင်ကို တွေ့လျှင် နုပ်နုပ်စဉ်းမည်။ ဆီပြန်ချက်မည်။
kai says: ပျက်စေသတည်း… ။
ကဲ… ပျက်စေသတည်း… ပျက်စေသတည်း.. ပျက်စေသတည်း…။ ( သုံးကြိမ် သုံးခါ)
ပလီကပြန်လာတဲ့နေ့ ကြိုးစားဖျက်ပေးဦးမည်ဖြစ်ကြောင်း..။ no hard feelings!
မြစပဲရိုး says: မတူ တာကို တုဖို့ ကြိုးစား နေတာကိုး။
၁၀နှစ် ၁၀နှစ်။ ထပ်ကျင့်လိုက်ဦး။ lol:-)))
kai says: ဖြစ်တဲ့နေရာပျက်တဲ့.. စိတ်ကို.. ပို့လွှတ်ကြည့်နေတာပါအရီးလတ်ရယ်..။
မေတ္တာအဖြစ်ပို့လွှတ်လည်းမထွက်.. ဆုတောင်းအဖြစ်ပို့လွှတ်လည်း မသွားနဲ့..။
တရားထိုင်လာတာ.. နေ့စဉ်(နေ့စဉ်) အနှစ် ၃၀ကျော်နေပြီ…။
နောက်ထပ်.. ၁၀နှစ်.. ထပ်ကျင့်ဦးမယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.